New Policy Customs! Isbedelada Rule Cad on Import & Export! - Shiinaha Longkou Fushi xirxirida
Shiinaha Customs ayaa sii daayay Order No.56 si ay ula qabsadaan xukunka Cad inbound taas oo ah in uu dhaqan- on 1th June, 2018.
hagaajin Qaar ka mid ah waxaa la sameeyey ku pre-Cad outbound, tusaale ahaan:
1. buuxiso iyo macluumaad sax ah xamuul waa in loo gudbiyaa Shiinaha Customs elektaroonig ah 24 saac ka hor inta loading on shiraac weel guddiga si / via / out of dekedaha Shiinaha.
ID CANSHUURTA 2.Shipper, lambarka xiriirka shipper, magaca shirkadda hubka ee sida xogta ugu muhiimsan ee pre-Cad haboon in ay beeraha khasab ah.
3.All badeecooyin hoos biilasha ee shixnadda waa in lagu dhawaaqey cad si buuxda iyo si sax ah. Shiinaha Customs dhaqan galin doonta Management List taban ku badeecooyin dhawaaqay. Qof kasta oo in-waafaqsan xeerka Customs waa la diidi doonaa
Shirkado badan ayaa soo saaray maraakiibta ogeysiisyada la xiriira iyo sidoo kale. Iyo macaamiisha waxaa looga baahan yahay si ay u bixiyaan tilmaamaha sax ah oo dhamaystiran maraakiibta ka hor waqtiga waraaqo cut-off ah sida lagu daabacay on websites shirkadaha maraakiibta '.
Maxaa isbedel habayn ku soo dejin doono oo ku saabsan?
Sida xamuulka laga keeno galay dhulweynaha China ama marisay dhulweynaha China, xogta Cad dhammeystiran oo sax ah oo xamuul ah waa in loo diraa Shiinaha Customs via xogta electronka ee 24 saac ka hor shixnad, June 1st, 2018.
Waa maxay macnaha xogta Cad dhammeystiran oo sax ah?
Magacyada dhammaan cargos hoos biilka ah shixnadda in si cad iyo si buuxda u sheegay in doontaan muujin, iyo waxyaabaha xogta iswaafajin ee Cad cusub waxaa ka mid ah:
1.USCC of consignor ah
2.Phone tirada consignor
3.Enterprise Code of shipper ah
4.Name ee hubka (ama qor "Si AMAR" xaalad gaar ah)
5.USCC ee hubka ah (Haddii hubka loo yahay "si aad u dalbato", ka dibna USCC looma baahna)
Tirada 6.Phone ee hubka (Haddii hubka loo yahay "si aad u dalbato", ka dibna la xiriir macluumaad looma baahna)
7.Name of consignor (ama qor "IN AMAR" xaalad gaar ah)
8.Enterprise Code of hubka
9.USCC ee xisbiga ogeysiin loo baahan yahay haddii hubka loo yahay "si aad u dalbato".
Tirada 10.Phone ee xisbiga ogeysiin loo baahan yahay haddii hubka loo yahay "si aad u dalbato"
lagu ciqaabi doonaa xadgudubyada ee safaree cad?
qaynuunka cadaab ayaa la aasaasay by Customs ee la xiriira xadgudubyada ee xereynta Cad. Name of qaynuunku waa "qaynuunka Hirgelinta cadaab Maamulka oo ka mid ah Customs ee Dadka Republic of China", kaas oo la soo saaray oo waxay noqdeen wax ku ool ah ee 2004.
Nidaamka ma keeni siidaynta macluumaadka macaamiisha '?
Nidaamka sixitaanka cusub Cad noqonin mid horseeda in siidaynta ganacsiga macluumaadka xasaasiga ah macaamiisha '.
items xog xasaasi ah ku daray in ay Cad (marka laga reebo magaca hubka) waa mid aan la soo bandhigi on biilka ah shixnadda soo saaray by side ah. Ka dib markii cad ee loo soo diray inay caadooyinkii, shaqaalaha kastamka waa in ay ilaaliyaan sirta ganacsiga iyo siraha la xiriira shaqada caadooyinka si waafaqsan sharciga.
The June 1st waa agagaarka geeska, si ay u hubiso alaabta maraan caadooyinka habsami leh, fadlan lacag bixisid si aad diiwaangelinta Cad cusub dareenka, iyo ka la xiray sii, alaabtana!